Amin'ny alalan'ny finoana tsotra feno fahatokiana
«Fa be indrindra ny fahasoavan'ny Tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana, izay ao amin'i Kristy.» 1 Tim. 1:14.
Tombontsoa ho antsika mandrakariva ny hitombo amin'ny fahasoavana sy handroso amin'ny fahalalana sy fitiavana an'Andriamanitra raha toa ka hazonintsika ny fifandraisana mamy amin'i Kristy. Mangataha amim-pinoana tsotra sy manetry tena amin'ny Tompo mba hanokafany ny sainao hahatakaranao sy handraisanao ny zava-tsarobidy raketin'ny Teniny. Amin'izay dia hitombo amin'ny fahasoavana ianao, ary hitombo amin'ny finoana tsotra sy feno fahatokiana (...)
Aza avela ho mahantra, na marary, na tsy mahavokatra ny fiainanao ara-panahy. Maro ireo mila ny teny sy oha-piainana atao sy asehon'ny Kristianina. Ny fahalemena sy ny fihazohazoana dia mahatonga ny fanafihan'ny fahavalo, ary izay rehetra tsy mitombo ara-panahy amin'ny fahalalana ny fahamarinana sy ny marina dia ho resin'ny fahavalo matetika.
Ny tena finoana dia miasa mandrakariva amim-pitiavana.Raha mibanjina an'i Kalvary ianao dia tsy hahatonga anao tsy hahatontosa adidy izany, na hampitsilamodamoka anao, fa hamorona ao anatinao finoana an'i Jesôsy, finoana miasa, izay manadio ny fanahy ho afaka amin'ny loton'ny fitiavan-tena. Raha misy olona manara-dia an'i Kristy dia tsy afaka ny ho sarotra ifandraisana izy, na ho mafy fo, na tsy hanampangorahana (...) Ny mpanara-dia an'i Kristy dia tsy afaka ny ho mpanjakazaka, na ho mpanao teny mandratra, na ho mpanaratsy sy mpanameloka.
Aoka ny finoana ho toy ny ravinala, handentika lalina ny fakany hatrany amin'ny tsy taza-maso, ary hahazo famelombelomana ara-panahy avy amin'ny loharano velon'ny fahasoavana sy famindrampon'Andriamanitra.
Misy loharano izay miboiboika mitondra fiainana mandrakizay. Tsy maintsy entinao eo amin'io loharano miafina io ny fiainanao. Raha esorinao, tsy ho eo aminao ny fitiavan-tena ka atanjahinao ny fanahinao amin'ny alalan'ny fiombonana tsy tapaka amin'Andriamanitra dia hitondra fahasambarana ho an'ireo rehetra mifandray aminao ianao. Amin'izay dia ho tsikaritrao ireo voailikilika, hampianarinao ireo tsy mahalala, hampaherezinao ireo ampahorina sy mijaly, ary, araka izay azonao atao, dia hanamaivana ny fahoriana ianao. Ary amin'izay dia tsy hoe manoro ny lalana mankany an-danitra fotsiny ianao, fa ianao mihitsy no mizotra eo amin'ilay lalana.